La xiriir - Rikoooo
La xiriir Rikoooo
chemin 107 dekedda Gaillard du
Ma ilowday furahaaga sirta ah? Halkan guji
Ma ilowday magacaaga isticmaale? Halkan guji
Waxaan ku hadleynaa Faransiiska iyo Ingiriiska kaliya
MUHIIM AH ka hor intaadan nala soo xiriirin, fadlan hubi noo FAQ waxaa laga yaabaa inaan horeyba uga jawaabnay su'aashaada. Mawduucyada ku saabsan arrimaha farsamada ee faylalkayaga ayaan dammaanad ka qaadayn inaan jawaab ka helno, hase yeeshe, waxaan isku dayeynaa intii karaankeena ah inaan ka jawaabno codsiyadaada markii aynaan shaqada badnayn. Xusuusnow, waxaan marti gelinnaa in ka badan kun faylal, ma siin karno taageero dhammaantiin, fursaddaada ugu fiican waa inaad si toos ah ula xiriirto qorayaasha.
Waxaan kugula talineynaa inaad nagala soo xiriirto cinwaanka emaylkeena webmaster@rikoooo.com gaar ahaan haddii aad rabto inaad noo soo dirto lifaaqyo. Waxaad sidoo kale nagala sheekaysan kartaa Facebook https://m.me/RikooooSimu
Waxaad ku qortaa magacaaga: (*)
mettez SVP valeur UNE shub "Saisissez votre naanaysta".
Username Rikoooo (optional)
E-mail Cinwaankaaga: (*)
Warkani ku saabsan yahay:(*)
account My xubinMy Times JumboAn add-ongolahakale Input aan saxnayn
Shay aad farriin: (*)
mettez SVP valeur UNE shub "Objet du farriin:".
Waxaad ku qortaa fariin: (*)
mettez SVP valeur UNE shub "Saisissez votre fariin:".
Waan akhriyay oo waan aqbalay in jawaabtu aan loo dammaanad qaadi karin su'aalaha ku saabsan taageerada farsamada ama codsiyada la xiriira add-ons
Waa inaad aqbashaa shuruudahayaga
Captcha (Lambarada 6)(*)
Refresh Input aan saxnayn
Qor 6 lambar ee aad ka aragtid sawirka